Waa maxay Valentine’s Day? Maalinta Jaceylka? - iftineducation.com
iftineducation.com – 14-ka Februari waa maalinta loogu yareeyo Valentine’s Day ama Maalinta Jaceylka aduunka. Hadaba waxaan eegayaa taariikhda iyo asalka maalintaan. Maalinta Valentine’s Day oo aduunka si aad ah looga xuso ayaa taariikhdeedu waxay tahay mid ku dhisan been iyo hal abuur aan sal ku lahayn sida loo dabaal deggo maalintaan. Wadamada reer galbeedka ayaa maalintaan lagu xusaa in dadka isjecel ay ubaxyo iyo shukulaato isweydaarsadaan. Waa maalin ay shirkaduhu si weyn uga faaidaan.